Uma ingagxili uthando, ukucabanga analytically kuba nzima. Futhi wokufunda ngemizwa bakhe beqiniso like. kungazelelwe imininingwane Small ibaluleke kakhulu, avame ngokuhunyushwa subjectively. Zikhona izimpawu indoda othandweni? Yebo, futhi bangabenzi lula ukushalazelela.
Uma umuntu anayo imizwa owesifazane ithenda, uzama ukuthola isikhathi wakhe nsuku zonke. Ngisho noma kungcono imizuzu 5 kuphela. Iziko le-lover ubuchopho kumiswa ukuqhanyelwa anda futhi ngamunye nomqondo ozithandayo entsha ithuthukisa lo mphumela. Futhi uma umuntu ebona into passion yakhe, imicabango mnandi ngokwengeziwe efika engqondweni. Izimpawu uthando indoda - yokusesha oxhumana nabo, "ngephutha" umhlangano ngaphansi ibhaxa kungazwakali kokulibala isikhathi somhlangano.
Umuntu wamthanda nawe, qiniseka uzame ngangokunokwenzeka ukuxhumana nawe, awukwazi ngqo kuphela, kodwa futhi ukuze uthumele i-SMS, i-imeyili, shayela kaningi kunokujwayelekile. Izimpawu uthando amadoda ubani bungabonakala ngesikhathi ingxoxo yocingo: wehlise umoya, inkulumo retardation blandness eyinqaba. uthando Deep, amadoda amaningi uncamela ukufihla. Nakuba magange ukuphinde sikhulume mayelana cute, kodwa ngemizwa yabo ngesikhathi esifanayo, ngisho nabangane, hhayi ngamazwi.
Abesilisa uthande ukubheka amantombazane. Iningi sithambekele ukubheka emuva, uma edlula ubuhle. Kodwa amadoda othandweni kangaka kancane njalo. Yiqiniso, uma bebona u-Angelina Jolie emgwaqeni, kusobala uyibuke okwesibili. Nokho, iningi amanye amantombazane ukuba zithande amadoda esabakho.
On isicelo kwesokudla
Izimpawu uthando amadoda ngezinye izikhathi baba eliqhakaze ngempela. Ngokwesibonelo, uma uqala ukuba banake kakhulu imbangi yakhe. Umuntu ngendlela ekhethekile osebenza kuwe, wawuyozisola ngomhawu ukulandela wonke amadoda endaweni yakho. Angase akucele ngisho ukunikeza ukuhlolwa zobuntu wakhe ezicini ezithile. Noma ngisho ucele ukuthi yini oyithandayo nge nesitha sakhe. I lover ufuna ukuba yedwa, ngakho ungabona-ke buhle kanjani ngisho nje ukhuluma ngani omunye umuntu. Ikakhulukazi uma ukudumisa ophikisana naye.
Etotosa futhi kuphela
Lover kubalulekile kuwe kwakukuhle. Sula izimpawu umuntu uthando - kokuyithinta kokunakekela impilo yakho nesimo sakho. Uke waba kwasemini engcocweni kunjalo, angakwazi ukubaleka umbuzo. Ngeke azame ukuqagela nezifiso zakho. Lokhu kubonakala eqinisweni lokuthi lapho ngeke ukubuza ukuthi ikuthandile isipho. Futhi ngeke ulinde impendulo ngomoya bated. Ngeke ubuke ukubukeka kwakho edabukisayo ekufezeni amafasitela futhi mhlawumbe injabulo ukumangala. Izimpawu uthando amadoda ngempela kule nto - ukunakekelwa imizwa ethandekayo.
Esikhathini umbuthano ewumngcingo
Lapho indoda ethile uthando ayilona ihlaya, uyobe nakanjani ukwethula kini ukuba abaseduze abangane, futhi ngezinye izikhathi ngisho nezihlobo. Futhi yilesi isibonakaliso esinzulu. Ngokuvamile eduze ngakho avunyelwe eduze kuphela ngempela ayithandayo abesifazane. Ngoba ukwenza kanjalo abomkhaya wakho kufana nokuthi i wena intombi yakhe esemthethweni.
Ukuxhumana e VIP isitayela
Bathandekayo iba muntu kakhulu amathuba okuba indoda ngothando. Futhi ngisho umakhonya inveterate akuqali nibhekane ngokubona abesifazane. Intelligent maqondana - isakhi esiyisibopho uthando lwangempela futhi isimo kuphoqelekile ukwedlulela uthando othandweni. Okwamanje, umuzwa eside engazalwanga ngaphandle ubuchopho nokuzwelana. Ngakho Ukulungele ukuhlangabeza futhi sikhule engqondweni.
Zonke izimpawu "uthando" we uphethwe yini kufanele ihlaziye, kodwa ungakhohlwa ukucabanga ngokuzeleko: ngempela sizobonisa cishe zonke izimpawu ohlwini, kodwa ngaso sonke isikhathi konke. Noma mhlawumbe wayesazi at the stage of umsuka umlilo passion futhi imizwa kuzomele isekele?